Banyere anyị - Baoding Mingwang Irrigation Equipment Co., Ltd.
Na -akwado Mingwang Irrigation Equipment Co., LTD guzobere na 1985, nke dị na Baoding City, Hebei Province, China.We bụ ọkachamara na Micro Irrigation Systems, dị ka Drip Irrigation Mezie, Main Water Pipe, Micro Spray Tape, Fittings, Sprinklers wdg; Ngwaahịa ahụ na -egbo mkpa ndị ahịa yana ụdị nkọwa dị iche iche.
Ngwaahịa anyị na -agbaso ụkpụrụ ISO 9001: ogo 2015 na ụkpụrụ injinịa. Asambodo ISO9001 bụ ntọala njikwa ụlọ ọrụ. Ngwaahịa anyị niile dabara na mmiri ịchekwa mmiri maka ọrụ ugbo, Ugbo, Ugbo & ịgba ala.
Anyị nwere netwọ ahịa mba ofesi nwere ngalaba 3 na mba ndị ọzọ. A na -ekesa ọtụtụ ngwaahịa anyị karịa mba na mpaghara 40.
Ka ọ dị ugbu a, anyị nwere ike ịnye ndụmọdụ teknụzụ na ọrụ maka ịgba mmiri mmiri na azịza irighiri mmiri microspray nye ndị ahịa niile.
Anyị na -ekwusi ike mgbe niile igbo mkpa ndị ahịa yana ibute ndị ahịa ụzọ. N'ime afọ iri atọ gara aga, a na -ere ngwaahịa anyị na mpaghara China dị iche iche wee bupụ ya na mba 40 na mpaghara na -ekpuchi Europe, America, Africa, Middle East na Asia.
A na -anabata gị ileta anyị wee ziga ajụjụ gị.
Guzobe otu ụlọ ihe nkiri ihe nkiri.
Emepụtara teepu ogbugba mmiri mmiri nke mbụ setịpụrụ na China.
Guzobere ụlọ nyocha & nyocha wee malite inye
Ọrụ nyocha maka ndị ahịa niile nọ na mkpa
Mepụta ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ na Dubai.
Nwee ụlọ ọrụ alaka na Hainan, China.
Kedu ihe kpatara anyị ji aga
Research & Design otu
Nwee ndị otu nyocha sayensị & imewe, raara onwe ha nye maka imepụta na imepụta ngwaahịa dị elu maka ndị ahịa n'ụwa niile.
Nweta ngwaahịa gị niile n'otu ebe
Anyị nwere ike wepụta ma nyekwa ọtụtụ ngwaahịa mmiri mmiri, dị ka teepu mmiri mmiri ntapu mmiri, pọmpụ mmiri mmiri, teepu Micro, ihe ndozi, ndị na -efesa mmiri wdg.
Nabata usoro OEM & ODM
na-enye ọrụ nkwụsị site na nlele, imewe, imepụta, nnwale na ọrụ ire ere.
Ọrụ mbupụ ọkachamara
Na mgbakwunye na ụlọ ọrụ mmepụta ihe, anyị guzobekwara ụlọ ọrụ azụmaahịa, ga -enye gị ọrụ mbupụ ọkachamara.